Top 2 iPod in freeware Transfer PC
> Resource > iPod > 2 Free iPod in PC Transfer Tools
Yaa ma jeela Chine oo lacag la'aan ah? Gaar ahaan marka laga daadiyo waa mid aad u xoog badan oo wax ku ool ah in la isticmaalo? Halkan waa dib u eegidda dhamaystiran oo 2 free iPod in qalab kala iibsiga PC. Waa maxay sababta aad u baahan tahay in aad bixiso marka aad ka heli kartaa aalad si ay u gudbiyaan music for free ka iPod in aad kombuutarka?
Waxa waxa aad u sheegto in aad sameysid. Ma aha oo kaliya in SynciOS ka iPod wareejin karo files si computer oo lacag la'aan ah, laakiin waxa ay sidoo kale yimaado oo aan xad laheyn. Interface user waa mid aad u cad oo wanaagsan loo soo abaabulay. Marka aad ka soo dejisan barnaamijyadooda ka, waxaad ka arki kartaa bedeley ku Murayaad bidix. Qaab in hawsha qabanayaan waa mid aad u hufan oo waa aalad muhiim u ah dadka isticmaala kuwaas oo raadinaya software is haysta in wareejin karaan, diinta iyo soo celiyo files iPod in PC ama sida kale ee ku xeeran.
Waxaad ku dhawaad ​​nuqul ka kartaa nooc kasta oo file sida music, iBooks, podcasts, barnaamijyadooda iyo qaar badan oo kale. Muuqaalka gaar ah ee qalabkan waa awood u leh inay helaan nidaam file macruufka. Fikrad Tani waxay u ogolaaneysaa user si ay u isticmaalaan qalabka inay noqoto flash drive dibadda. In kasta oo ay Qaabka fiican, taas oo lacag la'aan ah iPod inay taageero software kala iibsiga PC version dhan ah iPod. Sidaa awgeed, iyadoo aan loo eegayn sida jir qalab aad tahay iyo sida ay dad badan oo qalab aad leedahay, waxaad iyaga isku mar maamuli karo SynciOS. Marka aad kala soo bixi qalabka, oo aad ku xidhan karto iPod in aad PC iyo ordi barnaamijka.
Kaydinta habboon iyo kala iibsiga
Awood badan ku qalab macruufka
Taageer arrays balaadhan oo ah nooca file ka mid yihiin PNG, M4R, M4B, BMP, M4V, MP4, TIF, TIFF, IPA, M4A, regelingen, AIFF.
Muuqaalada Contact baahan in la hagaajiyo
Abuuritaanka gurmad adag iPod in PC for free marnaba fudud waxay noqon kartaa. PodTrans waa aalad sare uruursanayey in dib u soo celineysa aad itune Library iyo aruuriyaa aad ammaan iyo kalsooni dhan. Dhab ahaantii, waa qalab kaliya in bixisaa 2-habka kala iibsiga si fudud.
Iyadoo hal click, si aad u computer ah nuqul kartaa files iPod. Waxay bixisaa qalab kabashada dhacdo in iPod inay kala iibsiga computer shilalka waayo-aragnimo freeware. Waxay bixisaa soo kabashada kaaftoomi-free ka dib markii formatting aad drive ama la beddelo si computer cusub. Waa maxay dheeraad ah, haddii aadan rabin in masixi songs jir ah oo ka soo badbaadiyey file oo u hagaagsan Lugood leh iPod, oo aad samayn kartaa la PodTrans.
Qalabkan waxaa loo kabidda Lugood iyo iPod si cad la talaabooyin fudud. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku xidhi qalab kala duwan oo ay is dhaafsadaan waxyaabaha ka dhexeeya qalabka kuwa. Iyada oo ay feature Keenista buugga, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo files haboon aad u baahan tahay iyaga oo aan ka kaaftoomi kasta.
Qalab ayaa la wanaajiyey la daaqada baadhista loo yaqaan 'smart raadinta caqli' ay hoos u soo koobto natiijada waxa aad raadinayso ah. Waxaad ku qor kartaa magaca gabay, album ah ama playlist iyo raadinta smart si deg deg ah u heli doonaan music aad u.
Simple, si degdeg ah, dareen leh
Hagaagsan qalab badan oo karti
Taageerada ku dhowaad dhammaan ab iPod
Feature Keenista Buugga
Si toos ah u gudub soo noqnoqda songs
User Interface ma u fiican
Tababare iPod File: Maamul Music, Videos Photos fudayd